हाम्रो WIC प्रोग्राम चेकबाट इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (EBT) कार्डमा सर्दै छ जुन हामी "eWIC" मा कल गर्दैछौं। नयाँ eWIC कार्ड डेबिट कार्ड जस्तो देखिन्छ र तपाईंको परिवारको WIC सुविधाहरू एक ठाउँमा छन्।
eWIC रोलआउट अगस्ट, २०१ end को अन्त्यसम्म पूर्ण राज्यव्यापी हुनेछ। यदि तपाईंले अहिलेसम्म आफ्नो कार्ड प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, तपाईं चाँडै गर्नुहुनेछ!
प्रयोग गर्नुहोस् "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"WICShopper मा युपीसी र उत्पादन जानकारी WIC मा पेश गर्न सुविधा!
कुनै योग्य लाभहरू छैनन् - यो एक WIC योग्य आइटम हो, यद्यपि तपाईंसँग लाभ खरीद गर्न यो उपलब्ध छैन। या त तपाइँलाई यस वस्तुको लागि बेवास्ता गरिएको थिएन, वा तपाइँसँग यो खरीद गर्न पर्याप्त बाँकी फाइदाहरू छैन।